Soo bandhigida mesh giraanta birta ah
Waxa jira laba nooc oo mesh isku xidhka silsiladda ah: Mesh giraanta alxanka leh iyo mesh giraanta aan alxan lahayn.
Mesh giraanta alxanka leh waxay ku habboon tahay galoofyada goynta ka hortagga, maro goynta lidka ku ah iyo koofiyadda. Qaar ka mid ah faraantiyada walxaha khaaska ah ayaa loo adeegsadaa goobta milatariga waxayna leeyihiin hawlo difaac ah oo xabadu celiyaan.
Mesh giraanta aan alxanka lahayn ayaa loo isticmaalaa daahyada saqafka, daahyada iyo kala qaybinta qolka, sababtoo ah giraanta aan alxanka lahayn ayaa ka jaban mesh giraanta alxanka ah, laakiin waa ku adag tahay daahyada, ma fududa in la jebiyo oo si fudud loo sameeyo qaabab kala duwan.
Tilmaamaha mesh giraanta
Mesh giraantigu waxa uu ka samaysan yahay silig bir kaarboon ah ama silig bir ah ama silig naxaas ah oo ka kooban silig.
Qalab Dhexroorka siliga Cabbirka giraanta Miisaanka
ahama 304,316 0.53mm 3.8mm 3.8kg/m2
Birta aan-ka-soo-baxa 304,316 1mm 8mm 4.2kgs/m2
Birta aan-ka-soo-baxa 304,316 1.2mm 10mm 4.0kgs/m2
Birta aan-ka-soo-baxa 304,316 2mm 20mm 6.8kgs/m2
Birta aan-ka-soo-baxa 304,316 3mm 30mm 10kg/m2
Daaweynta dusha sare ee mesh giraanta birta
J: Dajinta Vacuum waxay ku habboon tahay mesh giraanta birta ah
Argon waxa lagu duraa faakuum hoostiisa, argon waxa uu ku dhuftaa yoolka, qaybaha kala go'ay ee bartilmaameedka waxaa lagu dhejiyaa alaabada korantada si ay u sameeyaan lakab siman oo siman.
Rinjiga dubista - ee birta, birta iyo naxaasta
Dubidda varnish waa habka ugu badan ee loo isticmaalo daaweynta dusha sare ee soo saarista daah giraanta birta ah. Isku qas midabka midabka la rabo, ka dibna mari daaha silsiladda birta ah, oo ugu dambeyntii dub dusha sare heerkul sare si aad u hesho midab waara. Iyo qiimaha ugu hooseeya.
Habka laalaadinta ee mesh giraanta birta
Daahyada saafiga ah ee giraanta waxaa sudhan kara rakibe kasta oo u qalma isagoo isticmaalaya qaade leh jillaab muhiim ah oo ka soo jeeda jidka dhaqameed ee adag. Ka dooro 5tan hab: dhaqe yar, dhaqe weyn, giraan, calaamad sare iyo jeebka joogtada ah.
Hore: Qurxinta muraayadda birta ah ee dahaadhay mesh silig qurxin ah
Xiga: Mesh gidaarka daahyada ah ee wax lagu qurxiyo ee tolnimada leh ee mesh